Tikidhada loo yaqaan 'YHT' ayaa ka dhammaanaya tirada kootada Izmit ka hor Bayram | RayHaber | raillynews
HometareenkaTikidhada YHT ee Isdiidh
22 / 06 / 2017 tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, TURKEY
Ka hor inta aan tigidhada Bayram Izmit loo iibin YHT tikidhada: Sida Ramadaanka Ramadaanka ah loo soo dhawaaday, qaar ayaa fasax ku maqnaa si ay u aadaan fasaxyo iyo qaraabo qaar.
Kuwa doonaya Tareenka Xawaaraha Sare ee gaadiidka, waxay soo bandhigaan haddii aysan hore u ballansan. Sababtoo ah, kahor inta aan la bixin, dhammaan tikidhada YHT ee qadada Izmit ayaa la iibiyay. Dhanka kale, rakaabyaha 1-20 13 kun 246 waxay ku safrayeen jidadka kala duwan ee laga soo galo Saldhigga Izmit intii u dhaxaysay Juun.
WAQOOYIN DHEERAAD AH
Ramadaan Maalmo fiidiyo ah, Saldhigga Idaacadda Izmit ayaa ka guuray.
Muwaadiniinta jecel Tareenka Xawaaraha Sare ee gaadiidka ayaa isticmaalay tikidhada oo dhan. Sababtoo ah cufnaanta sare ee fasaxyada, TCDD ayaa dhigaya tareen dheeraad ah iyo tareen dheeraad ah.
23 27 tareeno dheeraad ah ayaa lagu daray duulimaadyadii Ankara-Pendik iyo Pendik-Ankara ee bisha Ramadaan ee bisha June iyo 1 June. Duulimaadyada Konya-Istanbul, Istanbul-Konya, 2-2 ayaa soo galaya tareenka safarka 3-xNUMX. Tirada tareenada ka socota Ankara-Istanbul ilaa 3 ee Istanbul-Ankara ayaa loo kordhiyay 7 mar kale sababtoo ah xoojinta marti-galinta. Tareenka 8 waxaa loo adeegsaday safar gaaban.
"WAXAAD KA HELI KARTAA HALKAN
Ku xigeenka Agaasimaha TCDD ee Saldhigga Tareen Raila Raila Kenan Curur ayaa yiri, "Xiisadda fasaxyada ayaa kordhay sannadkii hore. Sannadkii hore, heerka tareenka xawaare sare leh wuxuu isticmaalaa boqolkiiba 70, sanadkan wuxuu gaaray 80 boqolkiiba. Marka dadka reer Izmit ay doorbidaan in ay raacaan tareen, waxaannu ka baxnay tikidhada. Tani waxay naga dhigtay mid aad u faraxsan. Waxaanu duulimaadyada dheeraadka ah iyo tareeno dheerad ah ku bixinnay adeegga wanaagsan ee muwaadiniinta. Waxaan dooneynay in qof walbaa uu tago oo uu ixtiraamo dadka ay jecel yihiin. Waxaan rajeyneynaa isku mid ah in ay ku jiraan Eid al Adha ..
13 THOUSAND 246 DADKA KA HORTAGO IZMIT
1-20 tirada rakaabka socday in jiho oo kala duwan ka Izmit Tareen Station dhexeeya June yiri: Arifiye in 442, 106 Bozüyük, Bilecik 142, 2891 Eskişehir, Polatlı 273, 407 Sincan, Ankara ama 2420, 1771 ilaa Konya, 275 ilaa Gebze, 4519 ilaa Pendik.
1-20 tirada rakaabka soo socda inuu ka Izmit Tareen Station dhexeeya June yiri: Arifiye ka 448, 74 ka Bozüyük, Bilecik ka 142, 2873 ka Eskişehir Polatlı ka 208, 442 ka Xinjiang, ka Ankara 2306 , 1751 oo ka yimid Konya, 261 oo ka yimid Gebze, 4451 oo ka yimid Pendik, wadar ahaan 12 kun 956.
BIG DENSITY - Munaasabad Ramadaan ah oo udhow Idaacadda Tababarka Izmit ayaa sidoo kale kor u qaaday dhaqdhaqaaqa. Cufnaantaas ayaa la filayaa inay kordhiso xitaa inta lagu jiro fasaxyada.
Waxaa jira BILOOWOOYIN - Badbaadinta amniga qaarkood ee helitaanka goobaha. Marka tirada rakaabku kordhaan, safafyadaasi waxay sidoo kale ka dhici karaan qaybtan.
KENAN CURÜL- TCDD Ku-Xigeenka Agaasimaha Saldhiga Tareen Raila Kenan Cure, ayaa sheegay in xiisahaasi ay farxad u tahay.
Tikidka tareenada ee 3 bin 280 ee ku yaal Izmit
Tigidhada tareenka ee loo yaqaan 'YHT Tareenka'
YHT waxay ka baxday tikidhada Istanbul
Tikidho tareenka xawaaraha sare ah ee Konya
Idaacadda ayaa ka baxday tikidhada tareenada xawaaraha sare leh
Agaasimaha Guud ee Waddooyinka ee digniinta gaadiidka ka hor
Waddada Bursa-Ankara waxay u furantahay ka hor intaan la qaadin
War xun ka hor fasaxyada fasaxa
Cabsi-siinta Xowliga Tareenka Sare ee Pre-Bayram
Diyaaradaha Istanbul-Ankara YHT
Duulimaadyada YHT Ankara-Istanbul
Ankara-Pendik duulimaadka YHT